Ndị isi njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nwere ntụkwasị obi na mgbake njem zuru oke site na 2023
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị isi njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nwere ntụkwasị obi na mgbake njem zuru oke site na 2023
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nnyocha ọhụrụ nke ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, nke Collinson na CAPA - Center for Aviation (CAPA) mere, na-egosi mmụba na atụmanya nke ịmaliteghachi njem na ọkwa tupu ọrịa ọrịa na 2023, na atụmanya sitere na 5 ọnwa gara aga.
Mmetụta nke njem na ọdịmma, yana egwu maka njem aghụghọ na akwụkwọ nyocha, na-atụ anya na ọ ga-anọgide na-enwe nchegbu ndị njem.
Azụmahịa na njem ogologo oge ka ọ ga-abụ akụkụ njem na-agbake ngwa ngwa na 2022; Ntụrụndụ mkpirisi na-ahụ mmalite nke revival.
Akwụsịla nchekwube na Eshia Pacific, ebe ndị ọkachamara ụgbọ elu na ndị ọkachamara njem na-akpachapụ anya karịa ndị otu mba ụwa.
Dị ka njem gburugburu ebe obibi na-aga n'ihu na-emegharị na Ọrịa Covid-19 na-aga n'ihu, Mbipụta nke abụọ ewepụtara ọhụrụ nke "Akụkọ mgbake njem njem Asia Pacific" sitere na Collinson, ahụmahụ njem njedebe njedebe zuru ụwa ọnụ, ọrụ ọdụ ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ahụike njem, na CAPA - Center for Aviation (CAPA), na-egosi ụlọ ọrụ njem kachasị ọhụrụ. amụma mgbake - gụnyere atụmanya ndị njem - maka afọ na-abịa na gafere.
Nnyocha sara mbara nke ihe karịrị 400 C-Suite na ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya sitere na ndị isi ụdị njem njem ụwa na-ekpughe na ebe 37% nke ndị zara ajụjụ na-atụ anya ugbu a "mgbake zuru oke" na ọkwa 2019 tupu ọrịa ọrịa na 2023 - ma e jiri ya tụnyere 35% N'ime nyocha Eprel 2021 - nchekwube na a ga-enweta mgbochi anụ ụlọ na US, UK na mba ole na ole ndị ọzọ mepere emepe esiwo na 33% ruo 24%. Na mgbakwunye, nchegbu gbasara ịpụ iche na nsonaazụ ule aghụghọ Covid-19 ka bụ nchegbu maka ndị zara ajụjụ.
Emere nyocha a na Septemba 2021 site n'aka Collinson na mmekorita ya na CAPA - otu n'ime isi mmalite azụmaahịa ntụkwasị obi nke ụwa maka ụlọ ọrụ ụgbọ elu na njem njem - ịga n'ihu n'ọmụmụ ihe mgbake ụlọ ọrụ ahụ wee buru amụma ahụmịhe onye njem ọhụrụ.
Oke na-emepe ọzọ
Polarization n'ihe gbasara njikwa njem, nnwale na atumatu ka dị n'ụwa niile, yana ihe ahịa chọrọ, ụkpụrụ na nha na-aga n'ihu na-agbanwe n'ime ọnwa ole na ole gara aga.
Nke ahụ kwuru, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọkachamara na-atụ anya ugbu a oke-emepe ọzọ Nhazi nke gọọmentị iji mee ka ọ dị mfe ma ọ bụ dị mfe na 2022 (43%), ebe otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ (32%) ka na-atụ anya na nhazi imeghe ókèala nke gọọmentị ga-amalite na ọnụego dị iche iche na 2022. Nke a bụ mbelata dị ukwuu site na nyocha nke April 2021. nke 56%, ebe ejighị n'aka na-achịkwa.
Nnwale ka ọ dị, na-ewepụ iche iche
Nkwenye ntụkwasị obi na nnwale nnwale na-enyere aka ịlaghachi n'enweghị nchebe na njem, ihe karịrị ọkara (54% - mmụba nke 3% kemgbe Eprel) na-atụ anya nnwale Covid-19 siri ike ka ọ bụrụ isi ihe na-emepe emepe ókèala ruo na njedebe nke 2022, yana 26 ọzọ. % na-atụ anya nke a ruo na njedebe nke 2023. Enwere ike ịhụ echiche a site na mmeghe ókèala na nso nso a na ahịa ndị dị ka Singapore, Australia na United States - niile na-ekwu maka ule Covid-19 dị ka isi ihe maka mbelata kwarantaini ma ọ bụ ọbụna iche. -njem n'efu.
Nke ahụ kwuru, 74% nke ndị ọkachamara na-enwe nchegbu site na akụkọ banyere nsonaazụ ule aghụghọ Covid-19 na paspọtụ ịgba ọgwụ mgbochi. Ọkwa nke ndị ahụ "nwere oke nchegbu" sitere na 38% na Eprel 2021 ruo 41% na Septemba 2021 yana maka "nwere mmetụta dị nro" site na 28% n'April 2021 ruo 34% na Septemba 2021. Iji dozie ụdị nchegbu ahụ, Collinson na-emekọ ihe karịrị Ndị ụgbọ elu 30, ọdụ ụgbọ elu na ndị na-enye teknụzụ zuru ụwa ọnụ iji nyere aka mejuputa usoro nkwenye n'ụzọ dị mkpa na njem ahụ, yana mee ka nnwale Covid-19 kwenye ntụkwasị obi na ịnweta ndị njem n'ụzọ dị mfe.
Gburugburu ụwa, ihere nke nnukwu ụzọ atọ (72%) kesara echiche na akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi ndị njem dị “dị oke mkpa,” ebe ọtụtụ gọọmentị anaghị etinye ihe egwu imeghe ókèala na-enweghị ha. Nke a bụ mmụba nke 5% ma e jiri ya tụnyere ọmụmụ Eprel. N'aka nke ọzọ, ihe na-erughị otu ụzọ n'ụzọ ise (18%) weere ha "adịghị mkpa," dịka ụfọdụ gọọmentị ga-ekwe ka ịnweta ohere n'agbanyeghị akwụkwọ ahụike dijitalụ.
Ozugbo onye njem batara n'obodo, ha ga-eche iche iche iche ihu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ ise nke ndị ọkachamara (38%) ugbu a na-atụ anya na usoro mgbochi iche ga-adị n'ọnọdụ maka ọdịnihu a na-ahụ anya dị ka nchekwa nchekwa ọzọ na mgbakwunye na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na nnwale, sitere na 23% na Eprel 2021.
N'aka nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị isi ụlọ ọrụ na-anọgide na-enwe olile anya maka ime ihe dị nso na mpaghara a. 42% kwenyere na a ga-ewepụ usoro mgbochi iche na njedebe nke 2021, n'ikwekọ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na usoro nnwale na-adịwanye ebe niile. Agbanyeghị, o doro anya na mmetụta ahụ ebelatala ma e jiri ya tụnyere 58% ndị nwere otu nkwenye ahụ laa azụ na Eprel 2021.
Ọnọdụ uche onye njem
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọkachamara kwenyere na njem "dị oke nchebe" ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agbaso ihe ngwọta mgbochi (dịka ọmụmaatụ, mkpuchi mkpuchi, ihe ndọpụ uche). Mana nke ahụ kwuru, ọnụ ọgụgụ ahụ agbadala site na 17% pụtara ìhè (42% dekọrọ na Septemba; 59% na Eprel), na-atụ aro itinye ntụkwasị obi n'agbanyeghị mgbasa nke ọgwụ mgbochi zuru ebe niile, ma nyekwa nuances dị iche iche maka ihe ndị mmadụ nwere ike were dị ka ngwọta adịghị mma.
N'otu aka ahụ, insiders na-atụle njem dị ka nanị "adịghị mma" amụbawo: site na 4% na April 2021 ruo 10% na September 2021. Nke a bụ ihe na-egosi ohere iji mesie ike, kụziere ndị njem na ịkọrọ ndị njem ka nchekwa si bụrụ ihe kacha mkpa, karịsịa dị ka ihe kacha mkpa. ọtụtụ ndị njem na-aga na mbara igwe.
N'ụzọ a na-atụghị anya ya, ajụjụ na-adị maka ma ndị njem ga-enwe ike ịlaghachi azụ ma zuru ike ozugbo etinyere atụmatụ ha. Eleghị anya, dịka nyocha ahụ siri kwuo, yana ụzọ atọ n'ụzọ anọ nke ndị ọkachamara (79%) na-ahọrọ ikwere na njem ga-enwe mmetụta "nrụgide karịa" karịa tupu ọrịa ahụ (site na 70% na Eprel 2021).
Nsonaazụ na-egosi na ọ nwere ike ịba ụba n'ọchịchọ ịpụ "pụọ n'ebe ìgwè mmadụ na-agbawa agbawa" na-enweta ohere ọsọ ọsọ na ahụmahụ ezumike nke a họọrọ, maka udo nke uche. Nke a dabara na draịva zuru ụwa ọnụ nke Priority Pass iji kwalite ahụmịhe ụlọ ezumike maka ndị njem; na iwebata Be Relax Spas maka izu ike tupu ụgbọ elu, yana nri na ihe ọṅụṅụ na-enweghị kọntaktị dị ka Njikere 2 Order setịpụrụ okpukpu abụọ ọnụnọ ya n'ofe ụlọ ezumike maka ahụmahụ iri nri na-enweghị ntụpọ.
Malitegharịa ekwentị nwayọ maka njem azụmahịa
Ọ bụ ezie na azụmahịa obere oge na njem ụlọ ọrụ ejirila nlezianya laghachi azụ n'ahịa ụfọdụ, enwere obere mmegharị n'etiti nyocha Eprel 2021 na Septemba 2021. N'ịkọ njem na 2022, ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ (35%) nke ndị zaghachirinụ na-atụ anya mgbake 41-60% na 2019 tupu ọrịa oria ojoo nke njem azụmaahịa dị mkpụmkpụ, ebe 23% dị mma karịa ma na-atụ anya ịkụ 61-80% nke 2019 ọkwa n'afọ ọzọ. Naanị 8% na-ahụ 80%+ nke ọkwa 2019 n'afọ na-abịa - na-egosi ogologo njem nke fọdụrụ na "usoro ọhụrụ" ya.
Na Eshia Pacific kpọmkwem, naanị 24% na-ahụ njem ụlọ ọrụ dị mkpụmkpụ na-agbake karịa 61% nke ọkwa 2019 n'afọ na-abịa - yana 7% na-ahụ mkpa ruru ụzọ anọ n'ụzọ ise nke ọkwa 2019.
Njem azụmahịa na-ewe ogologo oge na-anọgide na-abụ nke kachasị anya site na iru. A na-atụ anya mgbake na ọkwa 2019 ga-ewe ogologo oge karịa nke ọ bụla n'ime akụkụ ndị ọzọ, ebe ndị na-azaghachi na-enwekwa obi ike na oge mgbake nke akụkụ, n'ihi mmachi njem nke fọdụrụ ogologo oge karịa ka a tụrụ anya na mbụ. Dị ka 86% nke ndị zaghachirinụ si kwuo, ihe na-erughị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke azụmahịa ogologo oge / ahịa njem ụlọ ọrụ ga-alaghachi n'afọ ọzọ. Ebe na Asia Pacific, ihe dị n'okpuru otu ụzọ n'ụzọ atọ (30%) nke ndị zara nyocha kwenyere na anyị agaghị erudị 20% nke ọkwa 2019 n'afọ na-abịa.
N'ikwu okwu banyere nyocha ahụ, Priyanka Lakhani, Onye isi nchịkwa azụmahịa nke Middle East na Africa na Director South Asia, Collinson kwuru, sị: "Nchọpụta a na-aga n'ihu dị oké mkpa iji ghọta mmetụta ụlọ ọrụ na n'ihi ya, na-eme ihe ndị dị mkpa iji hụ na nchekwa na ogologo oge. nloghachi njem zuru ụwa ọnụ. N'ime ọnwa isii ruo ọnwa iri na abụọ na-esote ma ọ dịkarịa ala, o doro anya na dịka ụlọ ọrụ, anyị ga-aga n'ihu na-emepe emepe na ịkparịta ụka n'ụzọ dị irè na ndị njem. N'ime ọnwa ndị na-abịa, isi ihe anyị ga-elekwasị anya ga-abụ ịmepụta ngwá ọrụ na ngwọta ndị na-enyere ndị njem aka ịnyagharị ụzọ ha nke ọma na nke ọma."
CAPA - Center for Aviation Managing Director, Derek Sadubin, gbakwụnyere: "Ọ bụ ihe ùgwù ọzọ iso Collinson, onye ndu zuru ụwa ọnụ na ahụmahụ njem, na-nyochaa ọzọ otú ndị na-ege anyị ntị nke ndị ọkachamara ọkachamara na-ahụ ọdịnihu njem odida obodo na-akpụ akpụ. Ihe nchoputa a nwere ma nghọta, na n'ọnọdụ ụfọdụ ihe ijuanya. N'ozuzu, anyị ga-agbakọta ọnụ dị ka ụlọ ọrụ ma jiri nghọta ndị a nyere aka chọpụta ebe a chọrọ nlebara anya iji kwalite nlọghachi nke njem ụwa."